अष्ट्रेलिया जान दिदीभाइ बीच बिवाह - Sidha News
अष्ट्रेलिया जान दिदीभाइ बीच बिवाह
काठमाडौँ । भारतको पन्जाबमा एउटै दिदीभाइले अष्ट्रेलिया जाने लोभमा विवाह गरेका छन । भाई अष्ट्रेलिया कार्यरत भएको र बहिनीलाई अष्ट्रेलिया सिफ्ट हुनुपरेकोले उनले आफ्नै भाइसँग विवाह गरेकी हुन । विवाह लगत्तै बहिनीले नक्कली पासपोर्ट बनाएर अष्ट्रेलिया गएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन ।
भाइ बहिनीको विवाह गराउन उनीहरूका आफन्त पनि लागिपरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: अष्ट्रेलिया जानु अघि जान्नैपर्ने १० कुरा
१. महंगो देश –
अष्ट्रेलियामा एकतर्फी हवाई यात्रा खासै खर्चिलो छैन, तर दोहोरो यात्राका लागि महंगो हुन्छ । यदि तपाई आफ्नो ‘क्याम्पिङ’(पाल) छैन भने होस्टलमा रहन सक्नुहुन्छ, यो तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ । त्यसमा पनि तपाई व्यक्तिगत चाहानुहुन्छ भने एकल कोठा लिन सक्नुहुन्छ, यो पनि होटेलको तुलनामा सस्तो हुनछ । रेष्टुरेन्ट धेरै छन् तर, लोकल खाना खान्छु भनेर नसोच्नुहोस्। अष्ट्रेलियामा सार्वजनिक स्थलमा खाना बनाएर खाने ठाउँ बनाइएको हुन्छ, त्यसमा आफ्नो लागि आफैँले खाना बनाएर खानुपर्ने हुन्छ ।
२. अष्ट्रेलिया विशाल र अत्यन्तै विविधताको मुलुक –
अष्ट्रेलिया विश्वको छैटौँ ठूलो देश हो, जसले ७६९२०२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यद्यपी, जनघनत्वको आधारमा सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको देश हो । धेरै जसो अष्ट्रेलियन नागरिक समुन्द्र किनारमा बस्छन् ।
३. स्थानिय भाषासँग परिचित हुनुहोस् –
अमेरिकी र अष्ट्रेलियन अंग्रेजी भाषामा केही भिन्नता छ । अंग्रेजी भाषा नै प्रचलनमा रहेपनि अष्ट्रेलियामा फरक अर्थ लाग्छ । जस्तै, यदि तपाईलाई ‘टि’(चिया) पिउन निमन्त्रणा गरिएको छ भने यसलाई खाना खान बोलाइएको बुझ्नुपर्छ । हामीले बुझ्ने अंग्रेजी भाषा त्यहाँको स्थानीय अर्थमा बेग्लै अर्थ दिन्छ, त्यसैले तपाई अर्थ वा संकेतबारे सतर्क रहन आवश्यक छ ।
४. प्रसस्तै कङगारु देखिनेछन् भन्ने आशा नराख्नुहोस् –
जंगलमा देखिन सक्छन्, तर अष्ट्रेलिया भन्ने वित्तिकै भालु, कंगारु जस्ता जनावर वरिपरि देखिन्छन् भन्ने नसोच्नुहोस् । कहिले–काही मुख्य शहर तथा गल्फ कोर्समा पनि देख्न भने सकिन्छ ।
५. आफ्नो उदारतालाई नदेखाउनुहोस् –
६. कडा घामसँग लड्नु –
७. चकित पार्ने मौसम –
उत्तर अमेरिका वा युरोप जस्तो न्यानो हुँदैन अष्ट्रेलियाको बर्षात् । यहाँको घाम निकै कडा लाग्ने र चाँडै बर्षात् हुने हुन्छ । तर, बर्षभरी तातो हुन्छ भन्ने नसम्झनुहोस्, देशको उत्तरी भागमा न्यायो हुने गर्छ, जहाँको तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियसम्म झर्न सक्छ र हिउँ पनि पर्ने हुन्छ । समुन्द्र नजिक हुनाले यहाँको मौसम निकै छिटो छिटो परिवर्तन हुने गर्छ।
८. लोकल मदिरा –
यदि तपाई रातको समयमा पिउने सोच्नुहुन्छ भने त्यहाको स्थानीय मदिरालाई रोज्नुहोस् । अष्ट्रेलियामा स्थानीय मदिरालाई निकै गुणस्तरीय मानिन्छ।
९. ‘स्लो’ इन्टरनेट –
१०. बस्न लोभिनु हुन्छ –